Sokajy amin'ny raharaha fanafihana | Orinasa Mpampanoa lalàna
Ny tranga fanafihana dia matetika no takatra rehefa nanafintohina ilay olona tsy nahy na tamim-panetren-tena. Tsy maintsy miandrandra izany ilay nahavanon-doza fa hanao herisetra manokana ilay olona nanao izany ho voasokajy ho fanafihana. Tafiditra ao ny fandrahonana, ny fandrahonana amin'ny fampiasana fitaovam-piadiana, ary ny fanafihana mitovitovy amin'izany. Ny hafa dia tsy miraharaha fandrahonana tsotra fa ny fanafihana ataonao dia mety ho faty sy mahafaty. Tsy tokony hohadinoina ireo heloka kely ireo.
Ho an'ny fandikan-dalàna tsirairay dia sokajiana ho karazana tranganà fanafihana manokana ianao:
fanafihana - Heloka amin'ny resaka herisetra mianjady amin'izy samy izy. Ireo mazàna dia loza mitatao amin'ny ratra izay mety hiteraka fahavoazana amin'ny hafa. Mety ho fandrahonana am-bava izany no mety hahatonga ny fitarainana amin'ny toe-javatra tsy milamina.
Fanafihana amin'ny fitaovam-piadiana mahafaty - Ny fandrahonana dia mety ahitana fitaovam-piadiana mahafaty toy ny antsy, basy, na zavatra rehetra mety hiteraka fanaintainana.
Batter voavoryy - Raikitra ity raharaha fanafihana ity rehefa misy fitaovam-piadiana mahafaty manimba ilay lasibatra.
Fanafihana miaraka amin'ny bateria – Ny fandrahonana am-bava dia arahin’ny ratra ara-batana sy ny fampiasana hery ara-batana.
Battery – Ity karazana raharaha fanafihana ity dia tsy ahitana fandrahonana am-bava. Ny bateria dia hetsika mampiasa hery ara-batana mba hiteraka fanaintainana sy ratra.
Fanafihana sy bateria - Ity asa ratsy ity dia misy fandrahonana am-bava sy hery ara-batana amin'ny olon-kafa mba hanao fihetsika ara-nofo nefa tsy ekena.
Fanafihana an-trano sy bateria - Ity karazana fanafihana ity dia mitranga ao an-tokantrano izay atahorana olona iray ao amin'ny fianakaviana ary nokapohin'ny mpikambana ao amin'ny fianakaviana hafa.
Raha nanafika ianao dia tsy maintsy mahalala ny zonao. Mety avelan'ny sasany handalo fotsiny izao fandrahonana izao. Fa na eo aza izany fiampangana izany fandrahonana izany dia mbola mety ho henjana be ny raharaha. Mila mitatitra ny zava-nitranga ianao rehefa misy ny fanafihana ataonao.
Rehefa misy fanafihana dia mitaky anao ny polisy ho an'ny antontan-taratasy ara-pitsaboana rehefa tafiditra ny bateria. Misy ny Mpisolovava Fanafihana afaka miaro anao amin'ireny raharaha lehibe ireny. Hanome torohevitra ara-dalàna momba ny famahana ny raharaha tahaka izao izy ireo.
Ny mpisolovava mpanafika dia hahafantatra ny karazana raharaha tokony hapetrakao eny amin'ny fitsarana. Afaka misolo tena anao amin'ny fihainoana amim-pinoana izy ireo. Miaraha miasa amin'ny mpisolovava anao. Omano ny porofo rehetra sy ny porofo hanamafisana ny raharaha. Toy ny raharaha ara-dalàna rehetra, ny fanafihana dia ho raisina ara-drariny foana eny amin'ny fitsarana. Ny raharaha fanafihana dia mety ho fihetsika maharikoriko izay mety hiampangana ny mpanao heloka bevava amin'ny tranga maro.
Eritreritra 13 momba ny "sokajy tranga fanafihana"
01/17/2015 amin'ny 6:31 PM
Manana problm ao amin'ny carte de crédit-ko aho..tsy nandoa vola mihoatra ny iray volana noho ny olana ara-bola..amin'ny fotoana fohy niantsoan'ny banky ahy sy ireo sakaizako na dia ireo mpiara-miasa amiko aza aho..saingy mbola nanazava aho dia mamaly miantso any fa tsy hitako hoe ahoana ny fomba itondran'izy ireo ilay olona, ​​nikiakiaka izy ireo, niantso azy ireo hoe miantso polisy izy ireo, manenjika, ary ankehitriny dia mandray hafatra avy amin'ny Internet aho… na ny fianakaviako sy ny namako aza hoy izy ireo… mr. Nampahafantatra azy ireo tamin-katsaram-panahy i Bryan (vadin'i @@@@) fa voarohirohy tamina raharaha heloka bevava napetraka tany dubai izy hanaraha-maso ny CID ary efa eo am-pikarohana ity olona ity ny mpitandro ny filaminana ankehitriny .. .. ary ny vadiko tsy mahita torimaso tsara izy dia bevohoka ary miahiahy mafy… bec. Amin'ity hafatra ity ao amin'ny fb..ny namako sy ny fianakaviako dia efa mahalala sahady ary saro-kenatra tokoa hiresaka izay hataoko… ampio aho… afaka mametraka raharaha ihany koa aho
eto uae noho io fanorisorenana io… tnxz and God bless you…
04/18/2015 amin'ny 9:19 maraina
Misaotra anao nifandray taminay .. namaly ny mailaka nataonao izahay.
06/10/2015 amin'ny 3:14 PM
Te mitady torohevitra ara-dalàna momba ny raharaha iray handefasako ny fitsarana Sharjah aho. Nitranga ny teniko, Al Nahda, sharjah momba ny fanafihana avy amin'ny mpamily fiarakaretsaka. Resaka tsotra fotsiny izany izay nitarika ady ary voasarika aho ary namolavola ahy imbetsaka ilay mpamily mandra-pahatongan'ny naratra ny masoko ary nitsoka nandritra ity fanafihana ity dia nitafy solomaso ny masoko aho ary nesorina nandritra ny totohondry nariany. aho. Nanenjika ny vadiko ihany koa ilay fotoana rehefa niezaka nampitony ny mpamily teo aminay. Ny tatitra momba ny fitsaboana sy ny polisy dia natao tany Sharjah. Te-hitady ireo fomba fiasa amin'ny fametrahana ity tranga ity sy ny ara-dalàna amin'ny fanaovana izany aho.
Manantena valiny haingana,
Misaotra & arahaba,
10/07/2015 amin'ny 11:03 PM
Te hanontany aho raha toa ka afaka mametraka raharaha tsy misaraka amiko ny orinasako raha tsy mivoaka ny fandroahana aho. Nihoatra ny 3months aho satria efa nanana raharaha ho an'ny polisy aho. Miaraka amin'ny mpiara-miasa amiko ny pasipaoroko.
10/24/2015 amin'ny 2:35 PM
Azontsika atao ny mandray ny pasipaoronao avy amin'ny orinasanao, iangaviana aminay.
02/06/2016 amin'ny 8:10 maraina
Izaho dia manana mpiara-miasa 1 ao amin'ny orinasa ary tsy mandeha tsara ny asany. raha ny marina dia manana olana manokana izahay saingy afangaro amin'ny olan'ny tena manokana izy mba hisian'ny olana. Ankehitriny dia miampanga ahy izy handray ny asan'ny tena manokana ary manao olana ho azy aho fa tsy marina. Nilaza tamiko izy fa fantany fa afaka avelako hiala ao amin'ny orinasa izy fa hataony antoka fa hisy zava-dratsy hitranga amiko ary hanenina aho fa nametraka azy eto amin'ity orinasa ity. Amin'ity tranga ity, afaka mankany amin'ny polisy aho ary milaza azy ireo momba izany. tsy nanoratra porofo aho satria voalaza mivantana eo amin'ny tavako izany. Te-ho azo antoka fa ho voaro tsara aho na aiza na aiza ao amin'ny birao.
02/15/2016 amin'ny 3:36 PM
Te-hanontany aho momba ny fitondra-dalàna amin'ny banky.
Taraiky ny fandoavako vola any amin'ny banky aho noho ny fahataran'ny fandoavam-bola avy amin'ny orinasako - Nanazava aho fa hanao ny fandoavana karatra miandry amin'ny banky mandritra ny herinandro fa miantso foana izy ireo. Mpiasa maromaro im-betsaka isan'andro. Nijanona tamin'ny famaliako ireo antso aho ary nandefa SMS tamiko ny iray tamin'ireo mpiasa nilaza hoe "mandoa fa raha tsy izany dia zaraina amin'ny Birao Etihad ho an'ny lisitra mainty ny antsipirihanao"
Toa fandrahonana izany ary tsy dia azoko loatra.
Inona no fitoriana momba ny fandrahonana an-tsoratra?
02/27/2016 amin'ny 6:23 PM
Ny mpifanolobodirindrina amiko dia manenjika ahy tsy an-kijanona ary nanandrana nanakenda ahy indray mandeha izy.Miady amin'ny namako iray ao amin'ny tambajotra sosialy novaliako ny lahatsoratry ny namana iray fa tsy momba azy io na ny anarany aza tsy voatonona. ary tsy misy zava-dehibe izany. Fa ny mpifanolobodirindrina amiko dia tonga eo am-baravarana ary manao teny manevateva tsy an-kijanona ary ny mpiara-monina amiko hafa koa dia nahita azy nanao izany. Mba tariho aho hoe inona no tokony hataoko ary amin'ny lalàna manao ahoana izany?
07/15/2017 amin'ny 7:50 maraina
Nandrahona ny hamely ahy eo anoloan'ny mpiasa 20 hafa ny mpitantana ahy raha tsy mandefa rakitra roa aho ny ampitso. Niantso ahy teny ratsy izy amin'ny tsy fisotroana alikaola amin'ny iray amin'ireo antoko birao. Nilaza tamin'ny mpampiasa iray hafa koa izy mba hikapoka ahy rehefa nanome valiny diso aho nandritra ny fotoam-panontaniana sy valiny. Nasainy nametraka ireo antontan-taratasy tamin'ny Alakamisy aho. Matahotra handeha any amin'ny birao aho. Eo am-pitsarana aho izao. Tsy haiko izay hatao aorian'ny fandaniako be amin'ny visa sy ny fandaniana amin'ny dia tsy manam-bola homena ny orinasa aho raha tapitra ny aiko.
08/02/2017 amin'ny 1:14 PM
Ao amin'ny trano fizaran-tany aho. Ny Flatmate dia manasa ny namana ao amin'ny tranonay hisotro, hihira ary mitabataba be ry zareo. Raha hiantso polisy aho rehefa manao fety izy ireo, dia mampanahy ny mpiara-belona hafa aho satria efa namaky aho fa satria tsy ara-dalàna ny fizarana trano, dia hosamborina avokoa ny olona rehetra ao anatin'ilay trano. marina ve izany? Efa niresaka tamin'io olona io aho fa tonga tao amiko io olona io rehefa afaka 4 andro nikiakiaka sy nanondro ny tarehiko.
04/20/2018 amin'ny 3:06 PM
Ny namako dia tsy maintsy nanao taratasy fikarohana momba ny herisetra ary nanontany tena aho momba ny fototr'izany rehetra izany. Ankasitrahako ny filazanao fa tsy tokony ho ara-batana ny fanafihana. Zavatra tsy tsapako teo aloha io ary omena ahy be dia be ny mieritreritra.
10/20/2020 amin'ny 4:30 PM
Te-hanontany momba ny vehivavy iray nifandona aho ary teo am-panakanana azy sy nampitony azy dia nokapohiny ny masoko ary lasa maso mainty aho. Nanana tatitra ara-pitsaboana aho ary nametraka fitoriana azy. Hisy vintana lehibe ve hanasazy azy?
10/21/2020 amin'ny 10:20 maraina
Mety hahazo lamandy izy ary mety angatahan'ny polisy handoa ny faktiora ara-pitsaboana anao, ny tsara indrindra dia ny mitsidika anay hahalala bebe kokoa.